Taallada Cristiano Ronaldo oo laga taagay dalka India& Dood culus oo ka dhalatay…(Sawirrada, culeyskeeda iyo qiimaha ku kacay dhismaheeda) – Gool FM
Taallada Cristiano Ronaldo oo laga taagay dalka India& Dood culus oo ka dhalatay…(Sawirrada, culeyskeeda iyo qiimaha ku kacay dhismaheeda)
Ahmed Nur December 29, 2021
(India) 29 Dis 2021. Taallo laga sameeyay weeraryahanka Manchester United ee Cristiano Ronaldo ayaa la suray magaalada Calangute gobolka Goa ee dalka India iyadoo mudaaharaad lagu qaaday maamulka gobolka taalladan awgeed.
Ronaldo ayaa ka mid ah xiddigaha loogu jecelyahay kubadda cagta marka la joogo dalka India, waxayna maamulka gobolka Goa u dhiseen taallo 410 kiilo garaam ah.
“Waa markii ugu horreysay oo taallo uu leeyahay Cristiano Ronaldo laga taagay dalka India, tani wax kale ma ahan balse waa inuu dhiirro gelin u noqdaa dhallinyarta, haddii aad dooneysaan in kubadda cagta aan gaarsiino heer kale kaddib tani waa mid wiilasha iyo hablaha yaryar ay eegi doonaan, sawirro isaga qaadaan oo ay dhiirro gelin u noqoto” ayuu yiri Michael Lobo oo ah wasiir kasoo jeeda Goa isagoo la hadlayay warbaahinta ANI.
Si kastaba ha ahaatee, taalladan la dhisay ayaa ka careysiisay dad gaar ah iyadoo la arkay dad dhowr ah oo calammo madow kula hareer wareegaya taallada si ay u muujiyaan caradooda, waxaana dadkaas ka mid ah Premanand Divkar oo madaxweyne u ah Calangute constituency forum isagoo yiri: “Waxaa jiro xiddigo waaweyn oo kasoo jeeda Calangute kuwaasoo kubadda heer sare ka gaaray sida Bruno Coutinho iyo Yolanda D’Souza, maxaa taallooyin loogu dhisi waayay? Maxaa inoo loogu keenay nin Portugal ah?”.
Si kastaba ha ahaatee, taallada oo la wariyay inay qiimo ahaan ku baxday 12 lakh oo rubbi isla markaana u dhiganta lacag ka badan 16 kun oo doolay ayaa la dhisayay muddo saddex sano ah, waxaana laga taagay gobolka Goa oo uu mar Bortuqiiska gumeysan jiray.
Kylian Mbappe oo markale ka hadlay mustaqbalkiisa mar la weydiiyay inuu January ku biirayo Real Madrid... (Maxay ahayd jawaabtii uu bixiyay?)
Miyey Manchester City markale u dhaqaaqeysaa laacibka Tottenham ee Harry Kane?